ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း: 06/22/12
တိုကျိုငလျင်အတွက် မီးသတ်တွင် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် သင်ကြားမှု ရက်ပြောင်းရွှေ့ကြောင်းအသိပေးခြင်း..
ယခုနှစ် နွေအကုန်ဆောင်းအကူးမှာလှုပ်ခတ်မယ့် (ပြင်းအား ၇.၃ အဆင့်ရှိ) အင်အားပြင်းငလျင်အတွက် ဂျပန်ရောက်မြန်မာများလည်း ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်နဲ့ ကြိုတင်ကာကွယ်နည်းများအပါအ၀င် ရှေးဦးသူနာပြုနည်း၊ အရေးပေါ်အသက်ကယ်နည်းများနဲ့ စုရပ်(သို့)စုံရပ်တွေ အားလုံးသိရအောင် တာကာဒါနိုဘာဘာ ဘူတာအနီးရှိ ရှင်းဂျူးကုမီးသတ်တွင် ကျွမ်းကျင်သည့် မီးသတ်အရာရှိများမှ ရှင်းလင်းသင်ကြားပို့ချမည့်အ...စီအစဉ်ကို ယခင်က ဇွန်လ ၂၄ ရက်(တနင်္ဂနွေနေ့)တွင် ပြုလုပ်ဖို့ စီစဉ်ထားသော်လည်း မီးသတ်နှင့် မြို့နယ်ရုံးမှ အချိန်နှင့် ရှင်းလင်းပို့ချပေးမည့်သူများ၏ အခက်အခဲများကြောင့် အောက်ပါအတိုင်းပြောင်းလဲလိုက်ပါကြောင်း အသိပေးအကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။
(နီးစပ်ရာ မိတ်ဆွေများကိုလည်း လက်ဆင့်ကမ်း အသိပေးအကြောင်းကြားပေးစေလိုပါသည်။)
ကျင်းပမည့်နေ့- ဇူလိုင်လ ၁ ရက်(တနင်္ဂနွေနေ့)
ကျင်းပမည့်အချိန်-နေ့လယ် ၂ နာရီမှ ၃း၃၀ အထိ
ကျင်းပမည့်နေရာ- ရှင်းဂျူကု ဗဟိုမီးသတ်ဌာန(တကာဒါနိုဘာဘာ ဘူတာမှ လမ်းလျှောက်လျင် 8 မိနစ်ခန့်၊ အိုလံပစ် ကုန်တိုက်အနီး)
ဆက်သွယ်ရန်- ဒေါ်တင်တင်ဝင်း(၀၉၀ ၈၇၂၀ ၉၀၂၇)၊ မနန်းအိမွန်ချစ်(၀၈၀ ၃၇၁၅ ၅၇၅၂)၊ ဒေါ်ချယ်ရီသန်း(၀၈၀ ၁၂၁၉ ၈၅၃၀)၊ ဦးစိုးဝင်းရှိန်(၀၉၀ ၄၁၂၈ ၄၇၂၅)၊ ဦးမင်းညိုဝမ်း(၀၈၀ ၄၀၆၄ ၆၈၀၆)၊ ဦးဝင်းအောင်(၀၈၀ ၆၅၀၇ ၃၈၀၇)၊ ဦးတိုးကြည်ဆွေ(၀၉၀ ၆၁၉၈ ၁၉၆၂)၊ ဦးမိုးညို(၀၈၀ ၅၆၄၂ ၄၂၁၆)၊ ဦးဟန်ဝင်းထွန်း(၀၈၀ ၆၇၉၁ ၈၄၀၂)၊ ဦးထွန်းဝေ(080 3099 1503)၊ ဦးမောင်သန့်(၀၈၀ ၃၆၉၉ ၆၀၄၅)၊ ကိုထွန်းထွန်း(၀၈၀ ၃၄၃၅ ၀၆၆၃)တို့ထံ ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
မောင်၇ှင်... မိုးသောက်ကြယ် အယ်ဒီတာ
on Friday, June 22, 2012 at 9:30pm ·
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 9:41 PM No comments:
တန်လူ့လျှို၊ အိုမိုဒါ မိုဂျိ
ခေတ်အဆက်ဆက် သူ့နာမည်ကို သတ်မရခဲ့ ....
ဒီမြေဒီရေ အတွက်ပဲ ရှင်ခဲ့တယ်
ဒီမြေဒီရေ အတွက်ပဲ သေခဲ့တယ်
ပဲပြုတ်နဲ့ နံပြား တော့စားချင်ခဲ့သတဲ့ ။
ခေတ်အဆက်ဆက် သူ့နာမည်ကို သတ်မရခဲ့
အို အသင် အောင်ဆန်း ....
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 9:34 PM No comments:
ပထမ ခဏနားချိန်တွင် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများအဖွဲ့မှာ ကိုဂျင်မီနှင့် Dr. Larry Diamond စကားပြောနေစဉ်
ဒီကနေ့ 22.6.2012 မနက် ၉း၀၀ မှ ညနေ ၄း၀၀ အထိ ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်း အောက်ဘလောက်ရှိ House of Media Entertainment (Home) တွင် အမေရိကမှ နိုင်ငံရေးပညာရှင် Dr. Larry Diamond မှနေ၍ ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းမှုကာလတွင် တွေ့ကြုံရင်ဆိုင်ရမည့် အခက်အခဲများကို တင်ပြဆွေးနွေး သွားခဲ့ပါသည်။ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများအဖွဲ့မှ ကိုဂျင်မီ၊ ကိုမင်းဇေယျာ၊ ကိုဘသက်အောင် ကျောင်းသားအဖွဲ့အစည်းများမှ ဒီငြိမ်းလင်းတို့အဖွဲ့၊ မြန်မာနိုင်ငံလူငယ်များအစည်းအရုံး (MYU)၊ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် အေးဝတ်ရည်သောင်း၊ အခြားအခြားသော နိုင်ငံရေးလေ့လာလိုသော လူငယ်၊ လူရွယ်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ ဘာသာပြန်အစီအစဉ်ကို စာရေးဆရာ (Atta Kyaw) မှ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
သတင်း By Htet Aung (Albums)
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 9:24 PM No comments:
နှစ်ဖက်စလုံးက လူတွေမှာ ပြောစရာတွေချည်းပဲ တဲ့ (မိုးမခ)
ဒီတပတ်မှာ ဆရာဦးဝင်းတင်နဲ့ စကားပြောဖြစ်တာတွေ ရှိတယ်။ မေးခွန်းနဲ့ အဖြေတွေကို အတိအကျ မရေးတော့ဘူး။ ဆရာ့မိတ်ဆွေ ပါတီကလူငယ်တွေ၊ စာနယ်ဇင်းက သတင်းသမားတွေနဲ့လည်း စကားပြောဖြစ်တာတွေ ရှိတယ်။ တချို့ကို မေးဖြစ်တယ်။ တချို့ကို မမေးဖြစ်ဘူး။ ကိုယ်မေးတာတွေ သူဖြေခဲ့တာ ရှိသလို၊ မိတ်ဆွေတွေ မေးခဲ့တာကိုလည်း သူဖြေခဲ့သမျှ မှတ်စုထုတ်ပြီး ပြန်ရေးလိုက်ပါတယ်။
(၁) ဆရာက အမြဲတမ်း တဦးတည်း သွားလာ နေထိုင်တယ်။ အခြွေအရံလည်း မရှိဘူး။ သူ့အတွက် အဖော်သဟဲလိုတယ်။ ဒါကို လူတွေက အမြဲပြောတယ်။ မေးတယ်။ ဆရာကတော့ သူ့မှာ မလိုဘူးပဲ ပြောတယ်။ သူ့မိတ်ဆွေဟောင်းတွေဆီ သွားရင်လည်း တဦးတည်းပဲ။ ဘတ်စ်မစီးနိုင်တော့လို့သာ ကားငှားစီးတာ။ ကားကြုံလိုက်ပို့ပေးသူတွေနဲ့ လိုက်တာ၊ သွားတာ တွေ့ရတယ်။ အမြဲတန်း ၀ိုင်းဝန်းနေတဲ့ ရဲဘော်တွေ မိတ်ဆွေတွေမပြတ်လုို့သာ ဆရာကတော့ တဦးတည်းပဲ သွားလာ နေထိုင်ချင်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
သူက ဒုတ်ကောက်တောင် သယ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ ဒုတ်ကောက်ကို ပြန်သယ်နေရလို့တဲ့။ အခြွေအရံတွေနဲ့လည်း မနေချင်ဘူးတဲ့။ ယစ်မူးမိ၊ သာယာမိမှာ စိုးတယ်လို့ ပြောတယ်။ တဦးတည်း သူ့ကိုယ်ကိုသူ သယ်ဆောင်ပြီး စွမ်းဆောင်နေချင်တာလို့ ပြောတယ်။
(၂) နောက်တချက်က သူက ဧည့်ပရိသတ်၊ မိတ်ဆွေတွေ၊ လူထု လူတန်းစား အားလုံးနဲ့ တံခါးမရှိ ဒါးမရှိပဲ။ မနက်ကနေ ဧည့်သည်တွေ၊ ဖုံးတွေ၊ ပြောဆို တိုင်ပင်နေတာတွေ တိုင်တန်းနေတာတွေဟာ အဆက်မပြတ်ပဲ။ ဘယ်သူ့ကိုမှ ကျောခိုင်းသွားတယ် မရှိဘူး။ အကုန်လုံး တံခါးဖွင့်ထားတာပဲ။ သူ့မှာ ပြောစရာတွေ အများကြီးပဲ။ ပြောနေလိုက်တာမှ၊ သူ့မှာ မေးခွန်းတွေအတွက် အဖြေတွေ အဆင်သင့် ရှိနေသလိုပဲ။
တနေ့ကတော့ သူပြောတယ်။ ငါမောတယ်ကွာ။ ပင်ပန်းတယ်။ ပါတီကော ဒီလှိုင်းစာစောင်ကော။ အလုပ်က နေ့တိုင်းပဲ။ ဧည့်ကလည်း မပြတ်ဘူး။ ဒီနောက်ပိုင်းတော့ ငါ ဆုတ်တော့မယ်တဲ့။ အမြဲတန်းမှာ ဒေါ်စု၊ ဦးတင်ဦး မဟုတ်ရင် ဦးဝင်းတင် တဦးမဟုတ် တဦးက ၀င်ပါနေရတယ်။ လုပ်နေရတယ်။ တခါတလေများ အရူးတွေတောင် လာတယ်တဲ့။ သူက ရယ်ရယ်မောမောပြောတယ်။
(၃) အဲသည်အကြောင်းကို အတည်ပြုချင်လို့ ထပ်မေးတယ်။ ဒါကို အတိအကျ မဖြေပါဘူး။ တဦးကတော့ ဆရာ့ကို နိုင်ငံရေးသမားလုို့ မမြင်ချင်ဘူး။ သတင်းစာသမားလို့ပဲ မြင်ချင်တယ်လို့ ပြောမိတယ် တဲ့။ တခါတလေတော့လည်း သူက သတင်းစာဆရာလို ပြောတယ်။ အာလုပ်စကားကလည်း သတင်းသမားလိုပဲ။ ဒါပေမယ့် သူက အတိုက်အခံနိုင်ငံရေးသမားခေါင်းဆောင် တဦးအဖြစ် ကြံ့ကြံ့ခံပြီး ရပ်တည်ပေးနေရတယ်။
အဲသည်တော့ လက်ရှိမှာ ပါတီညီလာခံလုပ်မယ်၊ ညီင်္လာခံဖြစ်မြောက်ရေးကော်မီတီတွေ ဖွဲ့စည်းရေးကိုပဲ အာရုံထားပြီး ပြောနေတယ်။ စည်းရုံးရေးအဖွဲ့တွေ မရှိတော့ ဗဟိုကနေ ရပ်ကျေးအထိ ညီလာခံဖြစ်မြောက်ရေး အခက်အခဲတွေ ရှိတယ်။ ဒါတွေကိ်ု အာရုံစိုက်ပြီး ပြောနေတာ များပါတယ်။
(၄) ပါတီမှာ လူဟောင်းတွေ၊ လူသစ်တွေ ပြသနာတွေ ရှိတယ် ဆိုတာ သူကိုယ်တိုင် ၀န်ခံ ပြောဆိုပါတယ်။ အနီးကကော အဝေးက လူတွေကပါ ပါတီနဲ့ ပတ်သက်ရင် အားမလုို အားမရတာတွေ၊ လူဟောင်းတွေ လူသစ်တွေ အယူအဆ အသစ် အဟောင်းတွေကို ပြောဆို ဝေဖန်နေကြတာတွေလည်း ရှိတယ်။
သူကတော့ ဒီမိုကရေစီနည်းကျမှုနဲ့ အခုလို အခြေအနေတွေကို ဖြတ်ကျော် ဖြေရှင်းနိုင်မယ်လို့ အပြည့်အ၀ ယုံကြည်နေတယ်။ အရင်တုံးကတည်း နိုင်ငံရေးအကြပ်အတည်း အခက်အခဲတွေကြောင့် ဗဟိုပြု နည်းစနစ်တွေ၊ လူနည်းစုအခြေပြုပုံစံတွေနဲ့ ရင်ဆိုင် လှုပ်ရှားခဲ့ကြရတယ်။ အခုချိန်ကစပြီး ဒီမိုကရေစီနည်းကျ လုပ်ကိုင် အကောင်အထည်ဖော်ကြဖို့ဟာ စိန်ခေါ်မှုပဲ။ ဒါကို ဖြစ်အောင် လုပ်ကြရမယ်လို့ သူကတော့ မောင်းတင်ထားတာပဲ။ လူဟောင်းနဲ့ လူသစ်တွေ လက်တွဲပြီး ဒီမုိုကရေစီနည်းကျ လုပ်နိုင်ရမယ်လို့ သူက မျှော်လင့်တယ်။ အဲလိုမလုပ်နိုင်ရင်တော့ ပါတီက ပြန်ပြီး လျော့ကျသွားမှာပဲလို့ပြောတယ်။
(၅) အဲသလို ဆရာတို့ ဦးဝင်းတင်တို့ဖက်က အခက်အခဲတွေ အကြပ်အတည်းတွေ ပြောနေတော့ ဦးသိန်းစိန်တယောက် သမ္မတမိန့်ခွန်းအဖြစ် လူထုကို မီဒီယာကနေ တိုက်ရိုက်ပြောတဲ့ နေ့နဲ့ တိုက်ဆိုင်တယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ တနလာင်္နေ့လောက်ပေါ့။ အဲဒါနဲ့ တွေးမိတာ တခုပြောမိတယ်။ ဆရာတို့ဖက်မှာတောင် လူဟောင်းတွေ၊ လူသစ်တွေ၊ အတွေးဟောင်းတွေ၊ အတွေးသစ်တွေနဲ့ ပဋိပက္ခတွေ၊ မတူညီတာတွေ ငြင်းခုံနေရတာတွေ ရှိနေသေးတာ … ဟိုဖက်က အာဏာလက်ရှိ၊ သြဇာလက်ရှိ၊ ငွေကြေး ဓန ဥစ္စာ လက်ရှိ၊ လက်နက်အင်အား လက်ကိုင်ရှိတဲ့ အစုိုးရတွေ၊ တပ်မတော်တွေမှာလဲ အယူအဆတွေ၊ နည်းလမ်းတွေ၊ ရပ်တည်ချက်တွေမှာ ပြသနာတွေ ရှိနေမယ်။ ပြောဆိုစရာတွေ အငြင်းအခုံတွေ အတွင်းထဲမှာ ရှိနေမယ်ဆိုတာ တွေးကြည့်လို့ ရတာပေါ့လို့ ပြောမိတယ်။
ဆရာတို့ဖက်က အနည်းဆုံးတော့ ပွင့်ပွင့်လင်လင်းမေးလို့ရတယ်။ ဖြေချင်တဲ့ သူကလည်း ဖြေချင်ဖြေမယ်။ မဖြေဘဲ နေချင် နေမယ်။ အာဏာလက်ရှိ လက်နက်အင်အား လက်ရှိ သူတို့တွေကတော့ မေးခွန်းလည်း မေးချင်တိုင်း မေးလို့မရ၊ ဖြေချင်တိုင်းလည်း ဖြေလို့မရတော့ ဒါတွေက သူတို့ဆီက အတည်တကျ ထွက်လာဖို့တော့ မလွယ်ဘူး ဆိုတာ သေချာပါတယ်။ တွေးကြည့်ရုံပဲ တွေးလို့ ရတာပေါ့လေ။
ဆရာကတော့ ငါလည်း သည်မှာ အလုပ်က များတော့ ချက်ခြင်း နားမထောင်ရသေးဘူး။ ပြန်ပြီး မသုံးသပ်ရသေးဘူးတဲ့။ ဒါပေမယ့် ဦးသိန်းစိန်တို့ဖက်က စီးပွားရေးတွေ စားဝတ်နေရေးတွေကို ပြည်သူတွေ ပြေလည်အောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီး လျောက်ပြောနေတာမျိုးထက် တကယ် ပြည်သူတွေ အခုတောင်းဆိုနေတဲ့ အလုပ်သမား လယ်သမား ခံစားခွင့်၊ ရပိုင်ခွင့်၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး အာမခံချက်တွေအကြောင်း ပြောသင့်တာ။ ဒါတွေကို စေတနာထားကြောင်း ပြောဆိုရမယ့်အချိန်လို့ အလျင်အမြန် ထောက်ပြသွားပါတယ်။
(၆) ဆရာလူထုစိန်ဝင်း ဆုံးသွားတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမှတ်တရ စကားတွေ ပြောကြတယ်။ ဆရာကြီးတွေဟာ ဘ၀တသက်တာလုံး မဆုတ်မနစ် ရဲရဲဝံ့ဝံ့နဲ့ ယုံကြည်ရာ အမှန်တရားနဲ့ တရားမျှတမှုကိုသာ မြုပ်နှံလုပ်ကိုင်သွားကြသူတွေချည်းပဲ။ ပြီးတော့ သူတို့တွေဟာ အချင်းချင်းမှာ လူဟောင်း လူသစ်ဆိုပြီး မတည့်တာတွေ၊ ပဋိပက္ခတွေလည်း မရှိပါဘူး။ အဲသည်အတွက်လည်း သူတို့ဘ၀တွေကို အချိန်အကုန်ခံပြီး ပြောဆိုဆွေးနွေးနေခြင်းလည်း မရှိဘူး။ သူတို့တွေက ရှေ့ဆက်ပြီး ချီတက်နေတဲ့သူတွေချည်းပဲလို့ တွေးနေမိပါတယ်။
သည်တခါတော့ အင်တာဗျူး အမေး အဖြေတွေ မရေးတော့ဘူး။ မေးတာတွေ ဖြေတာတွေ၊ မှတ်ချက်ပေးမိတာတွေကိုပါ ကောက်နုတ်ပြီး ချရေးလိုက်ပါတယ်။ နောက်တပတ်မှာ မေး ဖြေ အင်တာဗျုး ပြန်လုပ်ပါဦးမယ်။
မိုးမခ။ ဇွန် ၂၂၊ ၂၀၁၂
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 8:56 PM No comments:
အထက်/အောက် ပါလီမာန်ရဲ့ Westminster Hall မှာမိန့်ခွန်းပြောကြားခွင့်ရတဲ့ဒေါက်တာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
ဒုတိယကမ္ဘာစစ် နောက်ပိုင်း ခမ်းနားကြီးကျယ်လှတဲ့ United Kingdom
အထက်/အောက် ပါလီမာန်ရဲ့ Westminster Hall မှာ
မိန့်ခွန်းပြောကြားခွင့်ရတဲ့ နိုင်ငံရပ်ခြားမှ နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်များ စာရင်း။
အနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဒေါက်တာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပါ..
7 April 1960 Charles de Gaulle President of France
11 July 1996 Nelson Mandela President of South Africa
17 September 2010 Benedict XVI Pope (state Visit)
25 May 2011 Barack Obama President of the United States
21 June 2012 Dr. Aung San Suu Kyi Union of Myanmar
ဦးဇင်း Venpunna Vamsa တက္ကသိုလ် မြတ်မင်း..။
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 8:41 PM No comments:
Aung San Suu Kyi's address to both Houses of Parliament - in full
လွှတ်တော်ဥက္ကဌ၊ ၀န်ကြီးချုပ်၊ အထက်လွှတ်တော်နဲ့ အောက်လွှတ်တော် အမတ်များရှင့် -
ခမ်းနားတင့်တယ်တဲ့ ဒီခန်းမကြီးမှာ စကားပြောဖို့ ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီဂုဏ်ပြုမှုရဲ့ ထူးခြားတဲ့ သဘောသဘာဝကိုလည်း ကျမ သတိပြုမိပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ စကားပြောဖို့ ခွင့်ပြုသင့်သလား ဒါမှမဟုတ် ဒီအဆောက်အအုံထဲက တခြားတနေရာမှာဘဲ ပြောခွင့်ပေးမလား ဆိုတာတောင် အစောပိုင်းက အငြင်းအခုံဖြစ်ခဲ့တာကိုလည်း သိရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုအခြေအတင် ဆွေးနွေးတာတွေဟာ ကောင်းပါတယ်။ ဒါဟာ ပါလီမန် လွှတ်တော်ရဲ့ အလုပ်ပါဘဲ။
(မိန့်ခွန်းမူရင်း ဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှု၍ ဆီလျှော်အောင် ဘာသာပြန်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။)
ဒေါက်တာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ ဥရောပ ခရီးစဉ်ဓါတ်ပုံများ (ဝေဖြိုးအောင် ဓါတ်ပုံမှ ကူးယူဖော်ပြပါတယ်)
By VOA at 6/22/2012 07:59:00 AM
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 5:59 PM No comments:
၁၉၈၀ ကျော်က ပန်းပုဆရာကြီး ဦးဟန်တင်က လူထုဒေါ်အမာရဲ့
ဦးခေါင်းပိုင်း ပုံတူရုပ်တုထုလုပ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီပုံတူရုပ်တုကို စထုကတည်းက
ကျွန်တော်ဘေးက ထိုင်ကြည့်ခွင့်ရခဲ့တယ်။ ထုပြီးသွားတော့ ကျွန်တော်
ကျွန်တော် ဘယ်လိုရေးဖွဲ့ခဲ့သလဲဆိုတာ ရေးရေးပဲ မှတ်မိပါတော့တယ်။
ဒေါ်ဒေါ်ရဲ့ပါးသွယ်မေးချွန်း ဦးစွန်းပင့်မြှောက်ဟန်။ ဒေါ်ဒေါ်ရဲ့ပါးလျားနှုတ်ခမ်း
အပြုံးသန်းဟန်။ ဒေါ်ဒေါ်ရဲ့စူးရှမျက်ဝန်း တောက်ထွန်းထွင်းဖောက်ဟန်တွေ
ကို ကျွန်တော် မြင်တွေ့ခံစားရတဲ့အတိုင်းခြယ်မှုန်းပြခဲ့တယ်။ အဲဒါလောက်ပဲ
၁၉၉၄-၉၅ လောက်မှာ ဒေါ်ဒေါ်ရဲ့မိန်းမသားမာန် လူသားမာန် ပုံရိပ်လို
သဏ္ဌာန်တစ်ခုကို အမေရိကန်သတင်းမဂ္ဂဇင်း TIME မျက်နှာဖုံးမှာ
မြင်ရတယ်။ဒီပုံရိပ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေ၊ ဂုဏ်ရည် ဥာဏ်ရည် မာန်ရည်တွေ၊ စွမ်းအင်သတ္တိတွေ ကျွန်တော့်ရင်ထဲမှာ ရိုက်ခတ်သွားတယ်။ ပုံရိပ်မှာ မိခင် မိန်းမသားတစ်ဦးရဲ့နူးညံ့သိမ်မွေ့မှုနဲ့ ခေါင်းဆောင်လူသားရဲ့ သန်မာခိုင်ကြည်
မှုတွေ ရောထွေးပေါင်းစည်းပြီး ဒီရေမြင့်သစ်နေလေရဲ့။ လူထုဒေါ်အမာရဲ့ ပုံရိပ်မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ လူထုဒေါ်အမာလိုပဲ လေးနက်ခိုင်ကြည် သန်မာပြတ်သားတဲ့ " တော်လှန် မာန် ဥာဏ်သတ္တိ " ပိုင်ရှင်တစ်ဦးရဲ့
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်
မှုကို ခံယူရရှိတဲ့ ပြည်ထောင်စုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ကမ္ဘာ့
နိုင်ငံပေါင်းများစွာရဲ့ချစ်ကြည်လေးစားမှုကို ခံယူပိုင်စိုးတဲ့ ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်။ သူ့ရဲ့ဂုဏ်ရည် ပြည့်လျှမ်းဖြိုးမောက်တဲ့ဥပဓိပုံရိပ်ပဲ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့ ပုံရိပ်နောက်မှာ
မှုန်တုန်တုန် ဝါးတားတား မပြတ်မသား ပုံရိပ်တစ်ခုက အရိပ်လိုထိုးနေ
တယ်။တစ္ဆေချောက်သလို ပြူးတူးပြဲတဲ ပုံရိပ်တစ်ခုက ထပ်ချပ်မကွာ
ပါလာနေတယ်။ဘုရားစောင်းတန်းတွေမှာ၊ ရှေးဂူဘုရားနံရံတွေမှာ တွေ့ရ
တတ်တဲ့နိပါတ်တော်ဆေးရေးပန်းချီတွေထဲက နတ်ဘုံနတ်နန်း အခြယ်အလှယ်တွေရဲ့နောက်ခံမှာငရဲခန်း အခြောက်အလှန့်ပုံရိပ်တွေ
ကို မြင်ရသလိုပါပဲ။ အဲဒီပုံရိပ်ကတော့မှုန်တေတေ မိုက်တိုက်တိုက်
ငေးစိုက်ကြည့်နေတဲ့ စစ်ဗိုလ်တစ်ယောက်ရဲ့ ပုံရိပ်ပါ။
ထောက်လှမ်းရေးတပ်မှူးကြီး၊ စစ်မဟာဗျူဟာဌာနကြီးမှူးကြီး၊ နိုင်ငံ
တော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားရေးအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး-၁ကြီး။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့်ရဲ့
ပုံရိပ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံရိပ်နှစ်ခုကို ကွန်ပျူတာနဲ့ စပ်ဟပ်ပူးတွဲပြီး TIME မဂ္ဂဇင်းက မျက်နှာဖုံးပုံလုပ်ထားပါတယ်။ ခေါင်းစဉ်ကိုလည်း the Lady and the General လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဒေါ်စု လွတ်မယ်လွတ်မယ် သတင်းဖြစ်နေလို့ သတင်းထောက်တွေ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း ခြံဝမှာ ပြုံတိုးစောင့်ဆိုင်းနေကြပုံတွေ၊
ကြိုကြားကြိုကြားပါပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲ့ ပါဝါအာဏာ တန်ခိုးဩဇာတွေ
အကြောင်းလည်း ဖော်ပြပါတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့်တို့များ တွေ့ဆုံလိုက်ကြရရင်၊ ဆွေးနွေးလိုက်ကြရရင်၊ အပေးအယူတွေ လုပ်လိုက်ကြရရင်(အောင်မယ်လေးလေး)
မြန်မာပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေး အမယ်ဘုတ်ချည်ခင်ထုပ်ကြီး ရှင်းလင်းကြည်လင်
သွားမယ်။ တစ်မျှင်စီ ရှောခနဲ ရှောခနဲ ဖျောခနဲ ဖျောခနဲ ချောသွားမယ်။
မောသွားမယ်။ ပြေသွားမယ်။ လည်သွားမယ်လို့ ရေးထားတယ်။
သတင်းထောက်ရဲ့ဆောင်းပါးဖတ်ပြီး ကျွန်တော် ရင်မောသွားတယ်။
မျက်စိလည်သွားတယ်။ ချောတာတွေ၊ ပြေတာတွေတော့ မမြင်မိပေါင်။ ဆောင်းပါးဖတ်ရင်း ရင်သာလေးနေမိတော့တယ်။
တွေကလည်း အတော်ရင်လေးအောင် လုပ်တတ်တယ်။ သူတို့ခေါင်းထဲမှာ
သလို လွင့်စင်ပျံဝဲနေတဲ့ ပေါက်ကရအမှတ်အယူတွေလည်းရှိတယ်။ချော့လို့
ရမယ့်လူကို မုန့်ပေးကြိုက်ချင်တတ်တယ်။ ခိုင်းလို့ရမယ့်လူကို အကူပေး
တပည့်မွေးချင်တတ်တယ်။ ခြောက်လို့ရမယ့်လူကို ခြတောင်ပို့ မြင့်မိုရ်တောင်
ထင်အောင်လုပ်ပြီး ချောင်ပိတ်ချင်တတ်တယ်။ ဆရာဇော်ဂျီရဲ့ကဗျာထဲကလို
မသိဝိုးဝါး ထင်ဝိုးဝါးအကျင့်တွေကလည်း ဘိန်းစွဲသလို စွဲနေလိုက်သေး။
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံသတင်းစာဆရာအသင်းက ကုလသမဂ္ဂ
အတွင်းဝန်ချုပ်ဦးသန့် မြန်မာနိုင်ငံပြန်လာစဉ်က ပန်းချီကျော်ပေါ်ဦးသက်ရဲ့
ဆီဆေးပန်းချီကားကြီးတစ်ချပ် လက်ဆောင်ပေးဘူးတယ်။ ပေါ်ဦးသက်က
ရုပ်ပုံလွှာကို မြန်မာ့ရိုးရာဟန်နဲ့ ပန်းချီရေးတယ်။ ပေါ်ဦးသက်က ကမ္ဘာ့
ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေ၊ သံတမန်ကြီးတွေ၊ ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ကြီး
တွေ ကမ္ဘာ့ပြဿနာအရပ်ရပ်ကို ပုဏ္ဏားကန်းဆင်စမ်းနည်းနဲ့ ထွေထွေ
လာလာ အဖြေရှာနေကြတာကို သူ့အနုပညာနဲ့ လက်ညှိုးငေါက်ငေါက်
ထိုးပြလိုက်တာပါ။ ပေါ်ဦးသက်စိတ်ထဲမှာ ကမ္ဘာ့ကြီးငါးကြီးထဲက
အကြီးဆုံးအင်အားကြီး အမေရိကန်ကြီးကို မျက်စောင်းထိုးလိုက်လေရော့
အခုကြည့်လေ။ TIME မဂ္ဂဇင်းက လုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီ။ ဗိုလ်ခင်ညွန့်ကို
ကယ်တင်ရှင်ပုံသွင်းနေပြန်ပြီ။ ဘာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးလဲ။ ဒီမိုကရေစီနဲ့
အာဏာရှင် စကားလက်ဆုံ ပြောလို့မကုန် ဖြစ်အောင် ဗိုလ်ခင်ညွန့်က စီမံ
ဖျော်စပ်ပေးမှာတဲ့လား။ ဟား ဟား ဟား ဟား။
သူ လုပ်နိုင်လှ၊ ဒေါ်စုကို ထောက်လှမ်းရေးစစ်ကြောရေး ဆွဲခေါ်တာ
လောက်ပေါ့။ အဲဒါက တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းပါခင်ဗျာ့။ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ
မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ တန်ရုံသာ ရွှေဥာဏ်တော်စူးရောက်တော်မူပါ့ အမေရိကန်
အဲဒီလိုတွေးနေမိရင်း ကျွန်တော် ဆက်စဉ်းစားတယ်။
စစ်အာဏာရှင်တွေဟာ တိုင်းပြည်ပြဿနာတွေကို တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
ခြင်းနဲ့ အဖြေရှာမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်စေတနာရှိရဲ့လား။ စိတ်အာသာဆန္ဒရှိရဲ့လား။
စိတ်ဇောအာရုံရှိရဲ့လား။ ကျွန်တော် အများကြီးသံသယရှိတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့
ဒွိဟသံသယတွေ မမှန်ပါစေနဲ့။ မကန်ပါစေနဲ့။ ဆုတောင်းပါတယ်။ ဆန္ဒပြု
မိပါတယ်။ ဒေါ်စုနဲ့ မတွေ့ဆုံချင်နေပါ။ မေးလား မြန်းလား၊ စစ်လား ကြော
လားတော့ မလုပ်ပါနဲ့။ သူ့ကိုတော့ ကျွန်တော်တို့လို လူ့ငရဲရဲ့အဝီစိဘုံဖြစ်တဲ့
စစ်ကြောရေးစခန်း မပို့ကြပါနဲ့။ အဲဒီလို မပို့ဘူးဆိုရင်ကို ကျေးဇူးကြီးလှပါပြီ
ကျွန်တော်လည်း တောင်တွေး မြောက်တွေးနဲ့ ဘယ်တွေချော်တောငေါ့
နေမိပါလိမ့်။ တွေးတာနဲ့ ရေးချင်တာ တခြားစီဖြစ်နေပြီ ထင်ပါရဲ့။ ချောတော
ငေါ့သွားတဲ့အတွေးတွေကို ဘရိတ်အုပ်လိုက်တယ်။ TIMEမဂ္ဂဇင်းဆောင်းပါး
ကိစ္စ ပြန်ကောက်လိုက်တယ်။ ဒီတော့မှ ဟိုးနှစ်ပေါင်းအတော်ကြာကကြည့်ခဲ့
ဘူးတဲ့ ကာတွန်းကဝေကြီး ဝေါ့ဒစ္စနေရဲ့ရုပ်ရှင်ကားတစ်ကားကို သွားသတိရ
မိတယ်။ရုပ်ရှင်ကားနာမည်က Lady and the Tramp တဲ့။ မြန်မာလိုတော့
ထိပ်ထားနဲ့တေလေပေါ့။ စကားကြောရှည်တယ် မထင်ပါနဲ့။ ဒီ ဒီကာတွန်း
ရုပ်ရှင်က တစ်နာရီခွဲလောက်ပြတဲ့ရုပ်ရှင်ကြီးဗျ။ ဇာတ်လမ်းကလည်းကောင်း၊
ကာတွန်းတွေကလည်း လက်ရာမြောက်တော့ အဲဒီအချိန်တုန်းက လူတိုင်းနှစ်ခါပြန်လောက် ကြည့်ခဲ့ကြတဲ့ကား။
ကျွန်တော် TIME သတင်းမဂ္ဂဇင်း ဆောင်းပါးကို ကောက်နုတ်ဘာသာ
ပြန်တယ်။ ဘာသာပြန်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကို" ထိပ်ထားနဲ့သေနာ "လို့ တပ်လိုက်
တယ်။" ထိပ်ထားနဲ့တေလေ " ရဲ့ ပဲ့တင်သံပါ။ TIME မဂ္ဂဇင်းကလည်း Lady and the Tramp ကို သံယောင်လိုက်ပြီး ဆောင်းပါးခေါင်းစဉ်တပ်ထားတာ မဟုတ်လား။TIME သံယောင်လိုက်တာက အရေးမကြီးဘူး။ ကျွန်တော် မြန်မာလိုဘာသာပြန်ခေါင်းစဉ်တပ်ဖို့ ခက်နေတယ်။ ထိပ်ထားဆိုတာကတော့ စကားလုံးလှပါရဲ့။ ချောပါရဲ့။ နောက်စကားလုံးကို ဗိုလ်ချုပ်ကြီးလို့ ဘာသာပြန်ရင် ဟန်မကျလှဘူး။ စာလုံးမလှ။ အသံမချော
ဘူးလေ။စဉ်းစားလိုက်ရတာ ဦးနှောက်ကိုခြောက်ကရော။ ခေတ်လူငယ်တွေ
ကတော့ ဦးနှောက်မုန်တိုင်းဆင်တယ် ဘာတယ်ပြောကြတာပဲ။ ကျွန်တော်
ကတော့ ဦးနှောက်နာဂစ်တောင် ဂစ်ကြည့်သေးတယ်။ မရဘူး။ နောက်ဆုံး
တော့ မတတ်သာ။ ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်ဆိုပြီး ဘာသာကောက်ပြန်လိုက်တယ်။
ဆရာတက်တိုးရဲ့" အရမ်းဘာသာမပြန်နဲ့ " ဆိုတဲ့ အာစရိယဝါဒ ဆုံးမစကားကိုလွန်ဆန်တယ်။ ကျွန်တော် အတင့်ရဲရဲ လက်ရဲရဲ ဇက်ရဲရဲ အရမ်းဘာသာပြန်လိုက်တယ်။
" ထိပ်ထားနဲ့သေနာ "
ထောင်ထဲမှာလည်း ဆရာတွေရှိသေးတော့ သူတို့က ကျွန်တော့်ကို
ဝေဖန်ပြစ်တင်ကြတယ်။ ခင်ဗျားနှယ်ဗျာ the General ကိုများ သေနာရယ်
လို့ ပြန်မှပြန်တတ်ပလေတဲ့လေ။ကျွန်တော် မနည်းဖြေရှင်းယူရတယ်။
ဒီလိုပါ ဆရာတို့ရယ်။ ကျွန်တော့်ဘာသာပြန်ဝေါဟာရ အပြည့်အစုံက
သေနာပတိပါ။ စာလုံးကြီးရှည်လွန်းလို့ သေနာနဲ့ ဖြတ်လိုက်တာပါ။
the Lady and the General ကို ထိပ်ထားနဲ့သေနာလို့ပဲ အလွယ်တကူ မှတ်ယူတော်မူကြပါဘိဗျား။
ဘာလဲဟဲ့ လူ့ငရဲ စာအုပ်မှ ကောက်နှုတ်ပါတယ် ..။
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 5:52 PM No comments:
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 1:00 PM No comments:
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် မြန်မာမိသားစုများတွေ့ဆုံပွဲ (ဘာဂန်၊ နော်ဝေ)
"ကြိုးစားလို့ ပြောတယ်မဟုတ်လား.... ကြိုးစားရမယ်... ကိုယ့်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှု၊ ကိုယ့်ရဲ့ဘာသာစကားကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့ ကြိုးစားရမယ်.."
နော်ဝေ၊ ဘာဂန်မြို့ မြန်မာမိသားစုများနှင့်တွေ့ဆုံပွဲ။
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 7:43 AM No comments:
Parallel Lovers "
Melody, Lyrics, All Instruments - Myo Chit Myanmar
Vocals & Harmonies - Myo Chit Myanmar & Thet Thet Htun Win
Sound Engineer - Myo Chit Myanmar
Producers - Myo Chit Myanmar & Sawng Hnin Pwint
Property of Myo Chit Myanmar HD Media Production.
သံစဉ်/စာသား/တီးခတ် - မျိုးချစ်မြန်မာ
တေးဆို - မျိုးချစ်မြန်မာ + သက်သက်ထွန်းဝင်း
ဟာမိုနီ - မျိုးချစ်မြန်မာ + သက်သက်ထွန်းဝင်း
ထုတ်လုပ်သူ - မျိုးချစ်မြန်မာ + ဆောင်းနှင်းပွင့်
မတူညီတဲ့ အသိုင်းအဝိုင်း နှစ်ခုကြားမှာ ..
နင့်ကိုမှ ဘာ့ကြောင့်များ ..
တွေ့တာနဲ့ ချစ်မိသွား ..
ငါ့စိတ်တွေ အံ့သြစရာ ...
လွန်ဆန်ဖို့ ကျိုးစားထဲ့ကြားက ..
အချစ်ကို အားကိုးရမလား ..
အသိကို ခေါင်းငြိမ့်ရမလား ..
တွေးရင်း ငါ လှိုက်မောလာ ...
အဖေအမေတွေရဲ့ တင်းကြပ်လွန်းတဲ့ မေတ္တာ
လူငယ်တွေက ချစ်စိတ်တစ်ခုနဲ့ ခေါင်းမာ
ဂုဏ်ငွေတွေ ရဲ့ ခြားနားမှုနောက်မှာ
ငါတို့ ဝေးသွားရမှာလား ........
တူညီနေတဲ့ အနှိုင်းမဲ့ တို့ မေတ္တာ
ဘယ်လိုလုပ်မလဲ စဉ်းစားမိတိုင်းမှာ ..
တို့ အနာဂါတ် တို့ ဘဝများ ..
အဓိဟာ နင် နဲ့ ငါ ...
သေချာတွေး တို့လျှောက်ရမယ့်လမ်းမှာ ..
ရင်ဆိုင်ဖို့ အဓိက တို့နှစ်ယောက်ပါ
ငါ့ အချစ်ကို ယုံစမ်းပါ ...
မိတ်ဆွေတွေကို ပြောပြချင်တာလေးတွေ ပြောပြပါရစေ။
ဒီသီချင်းလေးဟာ ကျွန်တော် ငယ်စဉ်အခါထဲက ရင်ထဲမှာ မွေးဖွားခဲ့ပြီးသား သီချင်းလေး ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီသီချင်းလေးကို ရေးဖြစ်ခဲ့တဲ့ အဓိကတွန်းအားက ကိုငှက်ကြီးရဲ့ ကာရန်မညီသောဆိုတဲ့ သီချင်းလေးပါ။
ဘယ်တော့ နားထောင်ထောင် အသက်ဝင်နေတဲ့ သီချင်းလေးပါ။ဒါပေမယ့် သီချင်းထဲမှာ ကျွန်တော် ဖြည့်စွက်ချင်ခဲ့တဲ့ လိုအပ်ချက် နှစ်ခု ကျန်နေခဲ့ပါတယ်။
အရမ်းကို အဓိက ကျတဲ့ မတူညီတဲ့ အားပြိုင်မှု တွေရဲ့ အရင်းခံ ဖြစ်တဲ့ စည်းစိမ်ဓန နဲ့ ဘာသာ မတူညီတာကိုဘဲ သူက ရေးဖွဲ့ခဲ့ပါတယ်။
ဂီတ အစည်းအရုံး ရဲ့ ပေါ်လစီတွေကြောင့်လဲ မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။သူခံစားရတဲ့အတိုင်းဘဲ သူရေးခဲ့တာပါ။
ကျွန်တော့် အတွေးထဲမှာ ချစ်သူတွေ ဟာ ဘာလို့ မပေါင်းရတာလဲဆိုတာတွေရဲ့ အဓိက အရင်းမြစ်ကို တွေးကြည့်တတ်လာတဲ့အရွယ်မှာ ...
မြန်မာပြည်မှာ ဘာသာနဲ့ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှု မတူတာနဲ့ တင်မက အသားအရောင် (လူမျိုး) ဆိုတာတွေ မတူတာနဲ့တင် မဟုတ်ဘဲ ...
တိုင်းရင်းသား ဆိုရင်တောင် လူမျိုးမတူတာ ကြောင့် မိဘ တွေက ခွဲကြတာတွေ ကြားသိမြင်လာတဲ့အခါမှာ ကျွန်တော် အရမ်း စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကျွန်တော် ဒီသီချင်းလေးရေးဖြစ်ခဲ့တာပါ။
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် လောလောဆယ် ဖြတ်သန်းနေရတဲ့ မြန်မာပြည် ရဲ့ အခြေအနေအရ ကျွန်တော် မဖြန့်ချီရက်ခဲ့ပါဘူး။
ကျွန်တော့် သီချင်းမှာ လူမျိုးတွေ ဘာသာတွေ အဆင့်အတန်းတွေ ပါနေတယ်။ကျွန်တော် ရည်ရွယ်တဲ့ နေရာက လွဲသွားကြမှာစိုးတယ်။
ဒီတော့ ကျွန်တော် ယောကျာ်းတစ်ယောက် ရဲ့ သိက္ခာ နဲ့ သစ္စာ အရ အတိအလင်းပြောပြပါ့မယ်။
ကျွန်တော့် သီချင်းဟာ မြန်မာနိုင်ငံသားစစ်စစ် တွေ ထဲက မတူညီတဲ့ ယုံကြည်မှုတွေ ကိုးကွယ်မှုတွေ နဲ့ ရပ်တည်နေတဲ့ မြန်မာတွေ အတွက် ဘဲ ရည်ရွယ်ပါတယ်။
အဲ့ထဲမှာ တိုင်းရင်းသားတွေ အကုန်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်ဖွား တရုပ်တွေ ပါတယ် ။
မြန်မာပြည်ဖွား ကုလား တွေ ပါတယ် ။
Rohingyas လို့ခေါ်တဲ့ ဘင်္ဂါလီ မျိုးမစစ်တွေ မပါဘူး။ ...
ဟုတ်ကဲ့ ထပ်ပြောမယ်နော် ။ ။ ။
ကျွန်တော့် သီချင်းရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အကြမ်းဖက် ကျူးကျော်နေတဲ့ ဘင်္ဂါလီ ကုလားတွေ မပါဘူး ။
ကျွန်တော် ရန်ကုန်မှာ ငယ်ငယ်တုန်းက အနေအများဆုံးဟာ ၃၆ လမ်း နဲ့ မဂိုလမ်းကြားမှာပါ ။
ကျွန်တော့် မှာ ကုလားသူငယ်ချင်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ် ။
ကျွန်တော် မြန်မာကုလားတွေ ကို မမုန်းပါဘူး ။
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့် တိုင်းပြည် နဲ့ လူမျိုးတွေကို လာကျူးကျော် စော်ကားနေတဲ့ ဘင်္ဂါလီကုလားတွေကို လုံးဝ မုန်းတီး ရွံရှာစွာ ဆန့်ကျင်တယ် ။
ရခိုင်တွေ အတွက် .. မြန်မာ တွေအတွက် .. ဘယ်တော့မှ ခွင့်မလွှတ်နိုင်ဘူး ။
အဲ့ဒါ ကျွန်တော့် ရဲ့ သစ္စာစကားပါဘဲ ......
သီချင်းလေးကို နားထောင်ကြည့်ကြပါ ...
အမိမြေနှင့် လူမျိုးအတွက် ထာဝရ မေတ္တာဖြင့် ...
မူရင်း - http://myochitmyanmar.blogspot.com/2012/06/blog-post.html
မှတ်ချက် သီချင်းကို တိုက်ရိုက်နားထောင်ဖို့ HTML Embed Codes တွေ ကို Notes တွေ မှာ ထည့်လို့မရသေးတဲ့ FB ရဲ့ အားနည်းချက်တစ်ခုကြောင့် ကျွန်တော် ဒီ Post လေးရဲ့ အောက်မှာ နားထောင်ဖို့ Player လေးပေါ်လာမယ့် Link လေး ကို ပထမဆုံး Comment Line မှာ ပြန်ရေးပေးထားပါတယ်။
တိုက်ရိုက် ဝင်ဖွင့်လို့မရတဲ့သူတွေ ပါ နားထောင်လို့ရအောင်ပါ။
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 7:33 AM No comments:
၂ဝ၁၂ ခုနှစ်၊ မေလ (၁) ရက်နေ့မှ ယနေ့ ဇွန်လ (၁၉) ရက်နေ့အထိ ကျွန်တော်ကျော်သူနှင့် ဇနီးဖြစ်သူ
ရွှေဇီးကွက်တို့သည် အမေရိကန်နိုင်ငံရောက် မြန်မာ့ဂုဏ်သိက္ခာကို မြှင့်တင်ပေးသော၊ မြန်မာ့လူမှုရေး သမားများကို ဂုဏ်မြှင့်ပေးသော၊ မြန်မာကို ကမ္ဘာကသိရှိအောင် ကြိုးစားမြှင့်တင်ပေးနေသော မြန်မာပြည်သူ လူထုတို့နှင့် ဖွဲ့စည်းထားသော “ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်” အဖွဲ့၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ ရောက်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
၂ဝ၁၂ ခုနှစ်၊ မေလ (၁) ရက်နေ့မှ အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ Los Angeles သို့ ရောက်ရှိခဲ့ကာ ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်အဖွဲ့၏ အတွင်းရေးမှူးဖြစ်သူ ကိုကျော်ဝဏ္ဏနှင့် ဇနီးဖြစ်သူ မမိုးချိုသင်း (ကဗျာဆရာကြီး တင်မိုး၏သမီး)တို့၏ နေအိမ်မှ အစပြုကာ San Francisco, Seattle, New York, Washington D.C, Albany, Utica, Buffalo, Florida , Phoenix အစရှိသည့် မြို့များသို့ လေယာဉ်ဖြင့်တစ်မျိုး၊ ကားနှင့်တစ်ဖုံ အဆက်မပြတ် သွားလာခဲ့ပြီး ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်အဖွဲ့ မြန်မာပြည်သူလူထုတို့နှင့် လက်ပွန်း တစ်သီးတွေ့ဆုံ၍ မြန်မာပြည်တွင်းရှိ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)၏ လူမှုရေးလုပ်ဆောင်ချက်များ ဖြစ်သော နာရေးကူညီမှုလုပ်ငန်းများ၊ သုခကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း၏ အများပြည်သူတို့ကို (အခမဲ့) ဆေးဝါး ကုသပေးမှုများ၊ သုခအလင်း ပညာဒါနလုပ်ဆောင်မှုများ၊ ရေဘေး၊ မီးဘေး၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တို့ကို ကူညီထောက်ပံ့ပေးမှုများ၊ စစ်ဘေးဒုက္ခသည်များအား ကူညီဖေးမပံ့ပိုးမှုများ၊ အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနိုင်ရန် အတွက် ပညာဒါနပြုလုပ်ပေးမှုများ၊ အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်မှုလုပ်ငန်းများ စသည်တို့ကို ရှင်းလင်းဟောပြော ပေးခြင်း၊ ရင်းနှီးစွာ ပြည်ပရှိ မြန်မာပြည်သူတို့နှင့် အမေးအဖြေကဏ္ဍများ လုပ်ဆောင်ပေးခြင်း၊ နာရေးကူညီ မှုအသင်း(ရန်ကုန်)၏ ပေးဆပ်မှုပုံရိပ်များကို Photo Slideshow ပြုလုပ်၍ ပြသရှင်းလင်းခြင်းများအပြင် ဇနီးဖြစ်သူ ရွှေဇီးကွက်၏ လူမှုရေးသမားများ၏စိတ်ဓါတ်၊ ခံယူချက်တို့ကို “ဗုဒ္ဓဓမ္မနှင့် ပရဟိတ” ခေါင်းစဉ် ဖြင့် အတွေ့အကြုံများကို ရှင်းလင်းပြောကြားမှုများတို့ကို ပြုလုပ်ပေးခဲ့သည်။
ပြည်ပ အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ မြန်မာပြည်သူလူထုတို့သည် ကျေနပ်အားရစွာဖြင့် သဒ္ဓါတရားထက်သန် စွာ လှူဒါန်းမှုများကို တက်ကြွစွာ ဖြင့်မိမိတို့၏ ချွေးနည်းစာထဲမှ လှူဒါန်းခြင်းကို တွေ့မြင်ခံစားခဲ့ရ၍ သာဓု … သာဓု … သာဓု ဟူ၍ ခေါ်ဆိုမိပါသည်။
အမှန်စင်စစ်မူ … ပြည်တွင်းတွင် ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ရှိနေကြသော မြန်မာပြည်သူတို့အား ကူညီပံ့ပိုး မှုများ ပြုလုပ်ပေးရန် လှူဒါန်းကြသော ပြည်ပရှိ မြန်မာပြည်သူလူထုတို့သည်လည်း ချမ်းသာကြွယ်ဝကြ သော မီလျှံနာ သူဋ္ဌေးကြီးများ မဟုတ်ပါ။ သူတို့သည်လည်း မိကွဲ၊ ဖကွဲ၊ သားသမီးတစ်ကွဲနှင့် ပြည်ပ နိုင်ငံသို့ ပင်ပန်းဆင်းရဲဒုက္ခခံကာ စွန့်လွှတ်စွန့်စားမှုပေါင်းမျိုးစုံနှင့် အကြောင်းအမျိုးမျိုးနှင့် ရောက်ရှိလာကြ သော လူသားများပင်ဖြစ်သည်။ ပြည်တွင်းတွင်ဘဲနေနေ၊ ပြည်ပတွင်ဘဲနေနေ .. အားလုံး အားလုံးတို့သည် လူသားများပင်ဖြစ်တော့သည်။ ထို့ကြောင့် လူသားပီသစွာ လူသားချင်းစာနာစိတ်ဖြင့် မေတ္တာ၊ ဂရုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥပေက္ခာ ဟူသော ဗြဟ္မစိုရ်တရားလေးပါး လက်ကိုင်ပြုကြကာ မိမိထက် နိမ့်ကျနေကြသော သူများအား တတ်နိုင်သလောက်၊ တတ်စွမ်းသလောက် လှူဒါန်းကူညီထောက်ပံ့ကြသော ကုသိုလ်ရှင်များ ပင်ဖြစ်သည်။
ဤတွင် မြန်မာပြည်သူလူထုတို့သည် ဗုဒ္ဓ၏ ဆုံးမသြဝါဒအတိုင်း ကုသိုလ်ရှင်၊ ပါရမီရှင်၊ ဒါနရှင်များ ဖြစ်ကြရန် ကြိုးကုပ်အားထုတ်မှုများသည် အတိုင်းထက်လွန်နေသည်ကို ကျွန်တော်မြင်တွေ့မိတော့သည်။
အကြောင်းမှာ . . . ပြည်တွင်းရှိ မြန်မာပြည်သူလူထုများ၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ မြန်မာပြည်သူလူထုများ၊ အခြား ပြည်ပ နိုင်ငံများရှိ မြန်မာပြည်သူများ၊ အများစုတို့သည် မည်သည့်လုပ်ငန်း ကိုဘဲလုပ်လုပ် အပြိုင်အဆိုင် အနိုင်မခံ အရှုံးမပေး လုပ်ဆောင်ကြသည်ကို တွေ့မြင်ရသည်။ အများ ကောင်းကျိုး လူမှုရေးလုပ်ငန်းအတွက် လုပ်ဆောင်ကြရာတွင် သူ့ထက်ငါပေးဆပ်မှုများကို လုပ်ဆောင်ခြင်း ကိုကား မဆိုချင်ပါ။ အများကောင်းကျိုးအတွက် လူမှုရေးလုပ်ငန်းများ အပြိုင်အဆိုင်ပေးဆပ်နိုင်လျှင် အများအကျိုးခံစားရမည် မဟုတ်ပါလား။ သို့ရာတွင် ထိုသို့ပြိုင်ကြ၊ ဆိုင်ကြရာတွင် တစ်ဖွဲ့ နှင့်တစ်ဖွဲ့ ၊ တစ်သင်းနှင့်တစ်သင်း၊ တစ်ကျောင်းနှင့်တစ်ကျောင်း၊ တစ်အုပ်စုနှင့်တစ်အုပ်စု ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ပုတ်ခတ်မှုများ၊ ဂုဏ်သိက္ခာချမှုများနှင့် မပြိုင်စေလိုပေ။ မိမိတို့၏ဖြူစင်သော ပေးဆပ်မှုလုပ်အား၊ မိမိတို့၏ဖြူစင်သော စေတနာတို့နှင့်သာ မှတ်တိုင်ထူကြဖို့ အရေးကြီးလှသည်။ မှတ်တိုင်ထူရာတွင် ကောင်းသောမှတ်တိုင်ဖြစ်ဖို့ အဓိကပင် ဖြစ်သည်။
ကောင်းသောမှတ်တိုင်ဟု ဆိုရာတွင်လည်း ဘုရားကြိုက်သော ဓမ္မမှတ်ိုင်ဖြစ်ဖို့လိုသည်။
ကျွန်တော်တို့၏ အမေရိကန်လူမှုရေးခရီးစဉ်တွင် လူမျိုးပေါင်းစုံတို့နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ရသည်။ အားလုံး တို့သည် စေတနာထက်သန်မှု၊ ဒါနထက်သန်မှု စသည့်မြန်မာပီသမှုများကို တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ သို့သော် . . . ကျွန်တော် အထက်တွင် ဖော်ပြရေးသားခဲ့သော သူ့ထက်ငါ အလုအယက် ပေးဆပ်လိုမှုများကို မြင်တွေ့ မိရသည့်အခါများကို ကြုံတွေ့ရခဲ့သည်များလည်းရှိသည်။ သူ့အဖွဲ့၊ ငါ့အဖွဲ့၊ သူ့အုပ်စု၊ ငါ့အုပ်စု၊ သူ့ကျောင်း ငါ့ကျောင်းစသည့် “ငါ” မပြုတ်မှုများကို မြင်တွေ့ရသော် များစွာစိုးရိမ်မိခဲ့ရသည်များလည်း ရှိခဲ့ရသည်။ စစ်မှန်သောချမ်းသာမှု၊ ငြိမ်းချမ်းမှုကို လိုချင်ပါက “ငါ” ဟူသော “အတ္တ” ကို ဖြုတ်ရမည် မဟုတ်ပါလား။
အထူးသဖြင့် မိမိကိုယ်ကို လူမှုရေးသမားဟု အမည်ခံထားသော လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့ လုပ်ကိုင် နေကြသော လူမှုရေးသမားတစ်ယောက်အနေဖြင့် … နာမည်ကြီးအောင် လုပ်ယူလို့မရ၊ စီးပွားဖြစ်အောင် လုပ်လို့မရ၊ ဂုဏ်သိက္ခာတတ်အောင် လုပ်ယူ၍မရ၊ လူမှုရေးကို ခုတုံးလုပ်ကာ ကိုယ်ကျိုးရှာ၍ မရကြောင်း သိရှိထားဖို့လိုသည်။ မိမိ၏ ဖြူစင်သော စေတနာ၊ မေတ္တာ၊ မုဒိတာ၊ ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာ စသည်တို့နှင့်သာ သက်ဆိုင်သည်။ လူမှုရေးဟုဆိုရာ၌ တစ်နိုင်တစ်ပိုင် မိမိနိုင်သလောက်ဝန်၊ မိမိထမ်းနိုင်သော အင်အား တို့နှင့် စုစည်းပေးဆပ်ကြဖို့သာ လိုအပ်သည်။ လူတစ်ဦးချင်းမှ အစုအဖွဲ့လေးများ၊ အစုအဖွဲ့လေးများမှ အုပ်စုကြီးများ ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးဆပ်ကြပါမှ လူ့လောကကြီး သာယာစိုပြေ ငြိမ်းချမ်းစေမည်ဖြစ်သည်။ ဝိုင်းဝန်းကူညီတွန်းအားပေးကြသော်ငြားမိမိတို့ ရဲ့ ဦးတည်ချက်၊ရည်ရွယ်ချက်များတူညီမှုများကိုက်ညီမှု၊ထပ်တူကြဖို့ လိုအပ်သည်.။
ဝိုင်းဝန်းကူညီတွန်းအားပေးကြသောမိမိတို့ ရဲ့ ဦးတည်ချက်၊ရည်ရွယ်ချက်များ သည်လည်း
တူညီမှုများကိုက်ညီမှုများမရှိပါကမိမိတို့ ဧ။်မှတ်တိုင်၊ပန်းတိုင်သို့ ရောက်မည်မဟုတ်ပေ။
တစ်ခါတစ်ရံ … မည်သည့် ပညာရှိကြီးကဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ မည်သည့် တရားဟောဆရာကဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ မည်သည့် ဂုဏ်သိက္ခာမြင့်မားသော ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဘဲဖြစ်ဖြစ် ဆိုဆုံးမ၍မရသော ကိစ္စရပ်များကို မထင်မှတ်သော ကလေးငယ်လေး၏ လုပ်ဆောင်မှုလေးတစ်ခုဖြင့် အားလုံးသော “ငါ” မဖြုတ်နိုင်ကြသေးသော၊ ကိုယ်ကျိုး ဖက်နေကြသော လူ့ဗာလများအတွက် “ငါ” ပြုတ်သွားကြကာအများအကျိုးဆောင်ရွက်လိုစိတ် မွေးဖွားစေ ခဲ့သော လူ့ပဏ္ဏိတဖြစ်သွားကြသော ဖြစ်ရပ်များလည်း ကြုံတွေ့စေခဲ့ရသည်။
ဤဖြစ်ရပ်သည်ကား အမေရိကန်နိုင်ငံ Albany မြို့ ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်အဖွဲ့နှင့် ပြည်ပရှိ မြန်မာ ပြည်သူလူထုတို့အား ကျွန်တော်နှင့် ကျွန်တော့်ဇနီးတို့ တွေ့ဆုံခဲ့သည့် ပွဲတွင်ဖြစ်တော့သည်။
၂ဝ၁၂ ခုနှစ် မတိုင်မှီကတည်းက ပြည်ပနိုင်ငံတစ်ချို့တွင် မြန်မာပြည်သူလူထုတို့၏ စေတနာ အရင်းခံ၍ ဖြစ်တည်လိုမှုများကြောင့် မြန်မာအသင်းအဖွဲ့များ၊ မြန်မာပြည်သူတို့၏ လွန်ကဲသော ယှဉ်ပြိုင်လိုမှုများဖြင့် ဖက်ပေါင်းစုံမှ စွဲခွာ၊ လှုပ်ယမ်း၊ လွန်ဆွဲမှုတွန်းအားများကြောင့် ပြိုလဲရတော့မည့် ဘာသာရေးအခြေခံသော လူမှုရေးတည်းဟူသော ကျောက်တိုင်ကြီး ပြိုလဲရတော့မလို ဖြစ်နေချိန်တွင် ၂၆.၆.၂ဝ၁၂ ရက်နေ့ အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ Albany မြို့ တွင် ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်အဖွဲ့၏ မြန်မာပြည်သူတို့နှင့်ရင်းနှီးစွာ တွေ့ဆုံစည်းလုံးစေမည့် အခမ်းအနားကို ကျင်းပခဲ့သည်။ ထိုအချိန်ပြည်ပတွင် “ငါ” ဟူသော အတ္တကို လက်ကိုင်ပြု၍ ဟိုလူလာရင် ငါမလာဘူး။ ဟိုအဖွဲ့လာရင် ဒီအဖွဲ့မလာဘူး စသည့် စကားသံများနှင့် ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရချိန်လည်းဖြစ်သည်။ ပွဲစလျှင်စချင်း ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်အဖွဲ့မှတာဝန်ခံမှ အဖွဲ့ ၏ ရည်ရွယ် ချက်၊ လုပ်ငန်းစဉ်များကို ရှင်းလင်းပြောကြားပြီးနောက်၊ ရွှေဇီးကွက်၏ ဗုဒ္ဓဓမ္မနှင့် ပရဟိတ ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ပရဟိတလုပ်ငန်းများ၊ ကျွန်တော်၏ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)၏ ပေးဆပ်မှုများ ရှင်းလင်းချက်များ စသည်တို့ကို နာရီအားဖြင့် (၃း၃ဝ) ခန့် ပြောကြားပြသခဲ့ပြီးအချိန်တွင် Albany မြို့ရှိ မြန်မာပြည်သူ၊ မိဘ ပြည်သူအပေါင်းမှ သဒ္ဓါတရားထက်သန်စွာ လှူဒါန်းမှုများပြုလုပ်နေစဉ် အသက်အားဖြင့် (၁၃)နှစ်ခန့်ရှိသော ကလေး သူငယ်တစ်ယောက်သည် ကျွန်တော်တို့ထံ ရောက်ရှိလာကာ “သားလည်းလှူချင်တယ်” ဟုဆိုကာ ကလေးငယ်က သူ၏လည်ပင်းတွင် ချိတ်ဆွဲထားသော ရွှေဆွဲကြိုးအားဖြုတ်ပြီး လှူဒါန်းမှုကို ပြုလုပ်ခဲ့ရာ ပွဲခင်းတစ်ခုလုံးမှ လူကြီးများနှင့် ကျွန်တော်တို့ဇနီးမောင်နှံပါ အံ့သြဝမ်းသာ ကြက်သီးမွှေးများ ထလောက် အောင် ပီတိများ လွှမ်းခြုံကာ သာဓု အကြိမ်ကြိမ် ခေါ်ဆိုလိုက်မိတော့သည်။
ထိုဖြစ်ရပ်သည် အချို့ သောလူကြီးများတွင်အရိုးစွဲနေသော“ငါ” ဟူသော “အတ္တ” လက်ကိုင်တုတ်ကို ရိုက်ချိုးခဲ့ခြင်းဖြစ်တော့သည်။ ထိုကလေးငယ်သည် အကြောင်းအမျိုးမျိုးနှင့် ဒုက္ခပင်လယ်ကြီးထဲမှ ပြည်ပနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိလာခဲ့သော မြန်မာပြည်ဖွား ကရင်လူမျိုးတစ်ဦးပင် ဖြစ်တော့သည်။ ငယ်စဉ်ကတည်းက မိဘဘွားဘွားတို့၏ ချွေးနည်း စာဖြင့် ရှာဖွေစုဆောင်းဝယ်ယူထားသော ရွှေဆွဲကြိုးလေးအား မိမိတို့၏ ရင်သွေးငယ်ကို မြတ်မြတ်နိုးနိုး မှတ်မှတ်ရရ တန်ဖိုးထားကာ ဆွဲချိတ်ပေးထားခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့လှူဒါန်းမှုပြုရန် ကလေးငယ်သည် ဝမ်းနည်းခြင်းမရှိ၊ နုမြောတသခြင်းမရှိ၊ ကြည်နူးပြုံးရွှင်စွာဖြင့် ကြေကြေနပ်နပ်ကြီး လှူဒါန်းခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ သူ၏အနီးတွင် ရှိသော ကလေးငယ်၏ မိခင်ဖြစ်သူ မျက်နှာသည်လည်း ကြည်နူးမှုပီတိများ လွှမ်းခြုံနေသည်ကို သတိထား မိတော့သည်။ထိုဖြစ်ရပ်ကား ကြည်လင်အေးမြသော “သာဓု” သံတို့ လွှမ်းခြုံသွားသည့် ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်အဖွဲ့၏ တွေ့ဆုံပွဲ တစ်ခုပင်ဖြစ်တော့သည်။
ထို့ကြောင့် “ဘယ်ဖက်လက်က လှူတာကို ညာဖက်လက် မသိစေနဲ့” ဟူသော စကားအတိုင်း ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည်သူတို့၏ အရိုးစွဲနေသော ကဗ္ဗည်းထိုးလိုသည့် အယူစွဲများ၊ အများအကျိုး ထမ်းရွက်ကြရာတွင် “ငါ” မဖြုတ်နိုင်သည့် လူ့အတ္တများ၊ လူ့ဗာလများ၊ ငါ့ကျောင်း၊ ငါ့အဖွဲ့များကို “ငါ” အမြန် ဆုံးဖြုတ်နိုင်ကြပြီး နောက်လူသားချင်းစာနာစိတ် မွေးဖွားကြကာ သာယာချမ်းမြေ့သော ငြိမ်းချမ်းသော ဓမ္မမှတ်တိုင်များ ထူနိုင် ကြပါစေဟု တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတော့သည်။
ဤအကြောင်းအရာအား ၁၉.၆.၂ဝ၁၂ ရက်နေ့တွင် ကျွန်တော်တို့၏ ပြည်ပ အမေရိကန် လူမှုရေး ခရီးစဉ်ရပ်နားခဲ့ပြီးနောက် မြန်မာပြည်သို့ပြန်ရန် Los Angeles မြို့ ကိုကျော်ဝဏ္ဏ၊ မမိုးချိုသင်းတို့ နေအိမ် တွင် နားနေချိန်၌ ကျွန်တော်၏ နှလုံးသားထဲတွင် ပေါ်ပေါက်လာမှုတို့အား ရင်ဖွင့်ရေးသားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပေသည်။
မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်၊ မည်သည့်အသင်းအဖွဲ့၊ မည်သည့်ကျောင်းကိုမျှ မရည်ရွယ်ပါကြောင်း နှင့် လူဟူသော လူသားတို့တွင် ဖြစ်ပေါ်တတ်သော ဓမ္မနှင့်အဓမ္မ လွန်ဆွဲမှုများအား ရုန်းကန်လွတ်မြောက် စေလိုသော၊ ဖြူစင်သောစိတ်ဆန္ဒဖြင့် အဖြူထည်သက်သက် အတွေးဖြင့်ရေးသားခြင်းသာ ဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် တေးရေး/ဆို ကိုရဲလွင်၏ “အတ္တဖြုတ်ကြ” သီချင်းခေါင်းစဉ်အား ခွင့်မတောင်းဘဲ သုံးခဲ့ခြင်းကို ဝန်ခံရပါ တော့သည်။
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 7:10 AM No comments:
by Victor Tan on Thursday, June 21, 2012 at 3:25am ·
Oxford တက္ကသိုလ်ကြီးက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ဂုဏ်ထူးဆောင် ဒေါက်တာဘွဲ့ ( ပါရဂူဘွဲ့ ) ချီးမြင့်စဉ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောသော မိန့်ခွန်း ရုပ်သံ။
အလီလီ အမယ်မယ် အဓိပ္ပါယ်ကြွယ်သည့်
တက္ကသိုလ်ဘုန်းကြွယ် (ဇွန် ၂၀ ၂၀၁၂)
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 6:00 AM No comments:
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ဗြိတိန်နိုင်ငံ အိမ်ရှေ့ မင်းသားနှင့်တွေ့ ဆုံ ..
ဒေါက်တာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့်အတူတွေ့့မြင်နေ ရတဲ့
ဗြိတိန် ဝေလ မင်းသား ၊ ကြင်ယာ တော် ကမီလာ ရှာမှရှားတဲ့ ဂန္တ၀င်ဓါတ်ပုံတစ်ခု.....။
ဒေါက်တာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် ဗြိတိန် အိမ်ရှေ့ မင်းသား ချားလ် နှင့်မိဘု၇ား ကြင်ယာတော် ကမီလာဒူချယ် Biitain,s Prince Charles and Camilla uchess တို့ 21.6.2012 တွင်တွေ့ ဆုံခဲ့ရာ အိမ်ရှေ့ မင်းသား ချားလ် မှ အထူးကြိုဆိုခဲ့ပြီး မြန်မာ့အရေး ကို အားပေးခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါတယ်...။
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 12:38 AM No comments: